Inopfuura Mberi kweMaguta e2 mumakore maviri muBursa Traffic Congestion | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara16 BursaBursa yaive pamberi pamaguta gumi nemana nemakumi maviri nematatu mumakore maviri mune traffic traffic
14 / 02 / 2020 16 Bursa, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
Bursa yakanga iri pamharadzano yemagetsi muguta gore rimwe nerimwe
Intelligent kupindirana mafomu uye kuwedzera nzira mumigwagwa inoitwa neBursa Metropolitan Municipality yakaratidzirwa mune yepasi rese data, iyo yakaderedza kuwanda kwemotokari. Bursa, yaive guta remakumi manonwe rakakomberedzwa kwazvo muna 2018, yakaiswa pamakumi maviri neshanu muna 160 mukutsvagurudza kwekambani yeNetherlands-yakagadzirira traffic jams pasi rese.
Netherlands Navigation technology kambani yakamira mukati ari TomTom Iyo 2019 data yeTomTom Traffic Index, iyo yavakagadzira kuti ibatsire maguta pasi rese kugadzirisa matambudziko akakurisa ekufamba ,aziviswa. Vatyairi, planners guta, motokari vanogadzira mitemo nhamba uye ruzivo pamusoro kuwandisa kwemotokari mumigwagwa munyika 6 muna 57-anotyisa ari 416 mumakondinendi kupa kutsvakurudza wakapiwa maguta 10 kubva Turkey. Ipo guta rine mutambiro wakanyanya kunetseka iri Bengaluru kubva kuIndia, Manila yekuPhilippines neBogota kubva kuColombia ndiro guta rechitatu rakamanikidzwa. Istanbul, uko kuwedzeredza kwemotokari kwakatemwa se makumi manomwe neshanu muna 2019, yakava guta re55 rakazara kwazvo mushure meIndia New Delhi.
Yakaderedzwa 2 nhanho mumakore maviri
Ankara, uko dhizaini yemotokari yakatarwa se makumi matatu neshanu muzana, inosvika zana pagumi pamunyorwa, nepo İzmir 32, Antalya 100 naAdana vari zana nemakumi mairi negumi. Pakati pemaguta eTurkey akabatanidzwa mukutsvaga uku, Bursa yakava rimwe remaguta paakapihwa rubatsiro rwemigwagwa. Kupinda iyo data ye134 yeTomTom Traic Index seguta re 144 rakanyanya kusangana, Bursa yakaiswa munzvimbo yegumi nemakumi matatu, ichisiya maguta makumi maviri neshanu mune irwo 180 runyorwa ne2017 muzana zororo mune traffic. Kusangana kwemigwagwa yeBursa muna 67 kwakapawo zororo rimwe kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakaitika gore rapfuura, uye ndokuwira pasi kuma5 mumaguta epasi rose. Nekudaro, Bursa yakasiya maguta 2018 kumashure mumakore maviri apfuura uye ikava rimwe remaguta anodzora traffic zuva nezuva.
11 August yakanakisisa zuva
Zvinoenderana nehuwandu hwegore ra2019, Bursa yaive nezuva rakanyanya kugadzikana mumigwagwa neSvondo, Nyamavhuvhu 11. Iyo yakanyanya kudzvinyirira kutandanisa mumigwagwa nhasi yakayerwa segumi muzana. Zuva rakaipisisa ra 10 rairatidzwa muhuwandu seMuvhuro, Zvita 2019. Kukurukurirana kwakanyanya nhasi kwasvika makumi manomwe muzana. Data traffic yakazoitika mukati mevhiki yemasikati uye manheru manheru peak maawa akaiswawo muchidzidzo. Saizvozvo, huwandu hwepamusoro mangwanani hwaive makumi matatu neshanu muzana, uye huwandu hwepamusoro manheru hwaive 30 muzana. Maererano nedatha iyi, vagari veBursa vakapedza imwe maminetsi gumi rwendo rwemaminitsi makumi matatu mangwanani uye imwe maminitsi 49 manheru.
Ichi chaingova kutanga
Kuongorora ruzivo rwemigwagwa yakaziviswa, Meya weBursa Metropolitan Meya Alinur Aktaş akati, "Bursa yakaverengerwa 416 pakati pemaguta akakomberedzwa muna 2019 mukutsvagurudza kwekambani yeNetherlands-based navigation technology, iyo inogadzirira nhamba yekushomeka kwemateru pamusoro pemaguta makumi matanhatu nenhanhatu. Takaisa pa208 mune dhepfenyuro ye2018 yekambani imwechete uye makumi matanhatu nenhanhatu mune ye 160 data. Izvi zvinoreva: SeBursa, takasiya maguta 2017 kupote nyika kubvira 67 uye akafukidza daro rakakosha maererano neruzhinji rwekufambisa. Izvo zvinogutsa kwatiri kuratidza ratidziro muBursa traffic kune nyika dzese data. Kwekutanga kwedu kwagara kuri kwekufambisa muBursa. Isu takatarisa pane smart junction application uye nzira dzekuwedzera nzira. Kunyangwe izvi zvidzidzo zvakatungamira kune zororo rakakura mukufambisa. Nekudaro, izvi zvidzidzo zvinongova kutanga. Tichaona kuti kusangana mu traffic kuderera kunyange zvakanyanya neye bhuroka maunija, mitsva njanji system mitsara, kuwedzerwa kweiyo iripo njanji kune dzimwe nzvimbo, iyo njanji rechiratidzo optimization. Uye zvakare, neTraffic Control Center uye Electronic Supervision System yatinozoshandisa, mapaki asina kunaka anodzivirirwa uye nekumhanyisa uye nekutyorwa kwemwenje kuchaderedzwa. Saka kuyerera kwemota kunozowedzera. ”
Iyo IMM Traffic Congestion 7 / 24
Zvingaita here kuti zvinyorwa zvezvitima zvigadzirise njodzi dzomumigwagwa?
Mheni yekurairirwa kweMigwagwa muIzmir
Metro yeIstanbul kusvika ku141 Mileage
Yokutanga Pasi Pasi Pasi Pasi Pasi Tunnel 141. Kupemberera
Pasi Pasi Pasi Pasi Pasi Pasi Mubhedha Tunnel Inopemberera 141 Age
IMM Inoita Basa Rokugumisa Kufambisa Kwemigwagwa paTem Motorway
CHP Gürer: "Kubba hakugoni kudzivirirwa muzvirongwa zveTCDD"